Interstitial Hernia(အူကျခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Interstitial Hernia(အူကျခြင်း)
Interstitial Hernia(အူကျခြင်း) ကဘာလဲ။
Interstitial hernia( အူကျခြင်း) ဆိုတာဟာ ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းရှိ အစိတ်အပိုင်း အတွင်းကလီစာ တစ်ခုခုက ပုံမှန်ကာကွယ်ထားတဲ့ ကြွက်သား(သို့) တစ်ရှုးတစ်ခုခုကို တွန်းပြီး ထွက်လာတာကို ခေါ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ပေါင်ခြံ ပိုင်းမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
interstitial hernia ဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ အရှေ့ဘက် ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းရဲ့ အလွှာတွေကြားက ဖြတ်လာတတ်ပါတယ်။ ကျွံလာတဲ့ အစိတ်အပိုင်းအိတ်ဟာ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား အလွှာတွေကြားမှာ ရှိနေလေ့ရှိပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကုန်းတဲ့အခါ၊ ချောင်းဆိုးတဲ့ အခါ၊ တစ်ခုခုကို မ တဲ့ အခါ၊ ြဖစ်တဲ့နေရာ( များသောအားဖြင့် ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း)မှာ နာခြင်း(သို့) မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း။
အားနည်းခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်မှာ တစ်ခုခုဖိထားသလို လေးတဲ့ ခံစားချက် ခံစားရခြင်း။
တကယ်လို့ သင့်မှာ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါ လက္ခဏာ ရှိနေရင်(သို့) သိလိုတဲ့ အချက်တွေရှိနေရင် ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံသင့်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ဟာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုချင်း မတူပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်အခြေအနေအတွက် ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သေချာသိနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ အမြဲတမ်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဝမ်းဗိုက်နံရံ ကောင်းကောင်း မပိတ်သွားခြင်း။
အချို့သော အခြေအနေတွေက သင့်ရဲ့ ကြွက်သားတွေကို အားနည်းသွားစေနိုင်ပြီး hernia ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားခြင်းက သင့် ဝမ်းဗိုက်အပေါ်ဖိအားတစ်ခုလို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းချုပ်ခြင်း။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းဟာ အိမ်သာသွားတဲ့ အခါ အားသုံးပြီးညှစ်ရစေပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ အရည်တွေရှိနေခြင်း။ (သို့) ascites ဟုခေါ်သည်။
သင့်ဆရာဝန်က သင့်မှာ ဒီရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သံသယရှိရင် ခန္ဓါကိုယ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ အခြားစစ်ဆေးချက်တွေ လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ သင့်မှာintertitial hernia( အူကျခြင်း) ရှိနေပြီဆိုရင် ဆရာဝန်က barium ဓါတ်မှန် (သို့) မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း (သို့) အာထရာဆောင်းကြည့်ပြီး ရောဂါအမည် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
အာထရာဆောင်း။ ဆရာဝန်က ကြိမ်နှုန်းမြင့်တဲ့ အသံလှိုင်းတွေကိုသုံးပြီး ခန္ဓါကိုယ် အတွင်းရှိ အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ ပုံရိပ်ကို ဖမ်းယူတဲ့ အာထရာဆောင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Interstitial Hernia (အူကျခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်း။ အစားအသောက်ပုံစံ ပြောင်းလဲတာကလည်း တစ်ခါတစ်လေ interstitial hernia ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ အစာအများကြီးစားတာ၊ ပြည့်တင်းအောင်စားတာမျိုးကိုရှောင်ပါ။ စားသောက်ပြီး မလဲလျောင်းပါနဲ့။ (သို့) ခန္ဓါကိုယ် ကိုင်းတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ပြီးတော့ သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကို ကျန်းမာတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အလေးချိန်သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ဝင်အောင် ထားပါ။ ဒီလို အစားအသောက်ပြောင်းလဲ မှုတွေက သင်မအီမသာ ဖြစ်ခြင်းကို မရှင်းလင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီ ရောဂါကို ကုသဖို့ ခွဲစိတ်မှုလုပ်ဆောင်သင့်ပါပြီ။
Interstitial hernia ကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မယ့် နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ အိမ်သုံးဆေးနည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ?
ဝမ်းသွားတဲ့ အချိန်နဲ့ ဆီးသွားတဲ့ အချိန်မှ ညှစ်မျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
Interstitial hernia.https://www.sages.org/meetings/annual-meeting/abstracts- archive/interstitial-
hernia-laparoscopic- approach/.Accessed February 10, 2017.
Interstitial hernia. http://www.dictionary.com/browse/interstitial-hernia.Accessed February 10, 2017.
ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, မိခင်ကျန်းမာရေး, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း